နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထိုင်ပေမြို့တော်ရှိလက်ရှိကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး ၁၀၁ စင်တာ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထိုင်ပေမြို့တော်ရှိလက်ရှိကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး ၁၀၁ စင်တာ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ထိုင်ပေမြို့တော်မှာရှိတဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ၁၀၁ စင်တာကို၁၉၉၈ တွင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပီ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံး စင်တာ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သော တိုင်ပေမြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ အမြင့်
509 M ရှိ၍ အထပ်ပေါင်း ၁၀၁ ထပ်ရှိသဖြင့် ၁၀၁ စင်တာဟုခေါ်ကြသည်။ ကုမ္မဏီနှင့် ရုံးခန်းအများဆုံး နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဈေးအရောင်းဆိုင်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်းများ အားအထပ်ခွဲကာ နေရာချထားသဖြင့် ဈေးဝယ်ထွက်လျှင် တော်ရုံနှင့် လည်ပတ်
၍မကုန်သော နေရာဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့် နိုင်ငံတွင်းပြည်သူများ နှစ်သက်ကြသော နေရာလေးလဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ခဲ့လို့မှ ထိုင်ဝမ်ရဲ့၁၀၁ထပ်ရှိတဲ့ဒီစင်တာကိုမရောက်ခဲ့ရင် ထိုင်ဝမ်ကိုလာရကျိူးမနပ်ဘူးလို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီသည်များ
ထိုစင်တာမှာယခုအချိန်အထိ အမြင့်ဆုံးဖြစ်၍ ထိုထက်မြင့်အောင် ဆောက်နေသော ဆောက်နေဆဲ စင်တာလည်း..ယူအေအီးနိုင်ငံ
1. Taipei 101, Taipei, Taiwan 101 509 m 2004
2. Petronas Tower, Kuala Lumpur, Malaysia 88 452 m 1998
3. Sears Tower, Chicago, USA 110 442 m 1974
4. Jin Mao Building, Shanghai, China 88 421 m 1999
5. Two International Finance Centre, Hong Kong, China 88 415 m 2003
6. Citic Plaza, Guangzhou, China 80 391 m 1996
7. Shun Hing Square, Shenzhen, China 69 384 m 1996
8. Empire State Building, New York, USA 102 381 m 1931
9. Central Plaza, Hong Kong, China 78 374 m 1992
10. Bank of China, Hong Kong, China 70 367 m 1989